महामारीका जनस्वास्थ्य कमाण्डर डाक्टर ! – Health Post Nepal
महामारीका जनस्वास्थ्य कमाण्डर डाक्टर !
२०७७ चैत १५ गते १५:३६
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुग्दा कुनै प्रदेशको फाइल पल्टाउँदै एक कर्मचारीसँग बुझ्दै थिए डा.समिर अधिकारी।
तीन दिन पहिले हेल्थपोस्टसँग कुरा गर्न समय दिएका डा. अधिकारीले हामीलाई आफ्नो कक्षमा आधा घन्टाभन्दा बढी कुराए।
त्यसबीच उनी निकै व्यस्त थिए। हामीसँग कुरा गर्दै गर्दा पनि डाक्टर अधिकारीले थुप्रै फाइलमा हस्ताक्षर गरे।
अहिले अवस्था सहज छ। अवस्था सहज तुल्याउन डा. अधिकारीको पनि ठूलो भूमिका छ।
सबैलाई सतर्क रहन आग्रह गरिरहेका छन्। गत वर्ष झैं उनको ध्यान सिमानाकाको आवतजावत व्यवस्थित गर्नेतर्फ अझै केन्द्रित छ।
यस्तो अवस्थाको ‘कमान्ड’ कसरी सम्हाल्ने भन्ने चिन्तामा थियो सरकार।
‘यो कमान्ड कसरी सम्हाल्ने? सञ्चारमाध्यमबाट जनतामा लैजाने कुराहरू कसरी भन्ने? स्थानीय तहमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी परिचालित कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। र, त्यसको कमान्ड हामिले सम्हाल्यौं,’ उनले भने।
‘सबैका फरक–फरक बुझाइ हुन्छन्। तिनलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपथ्र्यो। र, फिल्टर गरेर आधिकारिक कुरा सम्प्रेशण गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने।
सन २०१५ मा आपतलीन केन्द्र स्थापना भएको थियो। छोटो समयमा नै केन्द्रले थुप्रै काम गर्न सकेको भन्दै डा. अधिकारीले खुसी व्यक्त गरे।
‘सुरुदेखि हामी सरकारका तीनजना कर्मचारी यो शाखामा काम गथ्र्यौं। एकजना १०औं तहको प्रमुख, एकजना मेडिकल अफिसर र शाखा अधिकृत, अरू टेक्निकल सपोर्ट गर्नेगरी आइटीको मान्छे र मेडिकल अफिसर गरी दुईजना राखिदिएको छ। एकजना सपोर्ट स्टाफ गरी ६ जना छौं,’ उनले भने।
अहिले सातै प्रदेशमा यस्तै खाले प्रादेशिक आपतलीन केन्द्र स्थापना भइसकेका छन्।
कोरोना महामारीमा अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा गर्नेलाई सम्मान गर्दै
‘कतै कमजोरी हुँदा हामीले यो गर्न सकिएन भनेर सचिवलाई ब्रिफिङ गथ्र्यौ। मान्छे रातदिन आइरहेका छन्। जुन बाटोबाट आउँछन् भनेका थियौं, अर्कै बाटोबाट आइरहेका छन्। रातिको समयमा आइरहेका छन् भनेर सुझाव दिएका थियौं,’ उनले भने।
पछि दैनिक मन्त्रालयले कोरोना ब्रिफिङ गर्न थाल्यो। देशभरिबाट आएका डाटालाई डा. अधिकारीकै टोलीले भेरिफाई गर्नुपथ्र्यो।
रेस्पोन्स गर्ने सम्बन्धमा उनको टिमले सास्ती खेप्नुपर्‍यो। ‘हामीले जनताका जिज्ञासा सुन्न मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गर्‍याैं। त्यसले समस्या पूर्ति भएन। हटलाइन नम्बर ११३३ सुरु गर्‍याैं। यो चौबिसै घन्टा सुरु गर्‍याैं। यसमा काजमा जनशक्ति ल्यायौं,’ उनले भने, ‘कसैलाई संक्रमण हुँदा एम्बुलेन्सलाई खबर गर्ने, अस्पताल लैजाने काम गर्‍याैं।’
काम बाँडफाँट हुँदा अहिले केही हल्का भएको उनी बताउँछन्। ‘मन्त्रीज्यूको अनुपस्थितिमा आफू गएर बोल्नुपरेको छ।
सचिवज्यूको अनुपस्थितिमा पनि गइएको छ। महाशाखा प्रमुख गएकोमा त सामान्यरूपमा जानुपरेको छ। आफ्नो भूमिका छँदैछ,’ उनी भन्छन्।
उनलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको थियो। संक्रमण भएको समयमा उनले घरमै बसेर पनि थुप्रै काम गरे। डा. अधिकारीसँग २४ घन्टा ल्यापटप हुन्छ। कुनै काम गर्दा उनी तुरुन्तै गरिहाल्छन्।
आफैं संक्रमित हुँदा काम गर्ने विषय निकै गाह्रो हो। तर, डा. अधिकारीले संक्रमण हुँदा पनि काम गरे।
उनले आफू नरहेको अवस्थामा कसरी काम गर्ने भनेर अगाडि नै योजना बनाएका थिए।
‘कर्मचारीलाई तपाईं एक दिन एब्सेन्ट हुनु काम कसरी चल्छ? म एक दिन एब्सेन्ट हुन्छु काम कसरी चल्छ? भनेर आफ्नो मेजर भूमिकाबाट बाहिरिँदै टिमकै साथीलाई जिम्मा दिएर एक्सपर्ट बनाएका थियौं। त्यसैले हामीलाई काम गर्न सहज तुल्यायो,’ उनले भने।
आपतकालीन स्वास्थ्य कार्यसञ्चालन केन्द्र